कहा“ पुग्यो तिवारी हत्या प्रकरणको छानबिन ? | Mechikali Daily
बुटवल, । प्रदेश सीमांकन विभाजन हुनेगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका बेलामा रूपन्देही युवा संघका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीको हत्या भयो । गत पुस ४ गते देवदह खैरेनीमा मोटरसाइकलमा सवार तिवारीलाई अर्को मोटरसाइकलमा आएका अपराधीले गोली हानी हत्या गरे ।
युवा नेताको हत्याका विरोधमा देशैभरि प्रदर्शन भयो, उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । छानबिन समितिले अनुसन्धानका लागि १५ दिनको म्याद पायो । त्यो अवधिमा काम पूरा नभएको भन्दै फेरि १५ दिन म्याद थप भयो । तर, अहिलेसम्म तिवारी हत्या प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धान पूरा भएको खबर आएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कहिले हो त्यो पनि थाहा छैन ।
अनुसन्धान जारी रहेको र केन्द्रबाटै उच्च स्तरीय टोली यसमा खटिरहेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहको भनाइ छ । अपराधीको नजिक नजिक पुगेको र परिणाम अब छिट्टै आउने आशामा आफूहरु रहेको भन्दै प्रजिअ सिंहले मेचीकालीसित टेलिफोनमा भने–‘यो सामान्य व्यक्ति हत्याको मात्रै विषय नभएकाले यसमा राज्य नै गम्भीरताका साथ अनुसन्धानमा लागेको छ, उनका परिवारजनको पीडालाई पनि महशुस गरिएको छ, अब केही समयमै परिणाम आउन सक्छ ।’
तिवारीको हत्या सामान्य विषय नभएको भन्नेमा आफूहरु पनि रहेको बताउ“दै प्रजिअ सिंहले अनुसन्धानका काम सही ढंगले अगाडि बढेको दाबी गरे । दिनदहाडै एक जना समाजसेवी, युवा नेताको हत्या भएपछि जिल्लाबासीहरु आतंकित भए । यसलाई प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै युवा संघका कार्यकर्ताहरु आक्रोसित पनि भएका छन् । उनीहरुले अनुसन्धानका कामहरुमा प्रहरीलाई कतैबाट दबाब र प्रभाव आएको पनि आशंका गरेका छन् । तर, जिल्ला प्रमुख सिंहले यो विषय आफूहरुका लागि पनि सुरक्षा चुनौतीको विषय रहेकाले यसमा कतैबाट कुनै पनि प्रभाव र दबाब नआएको बरु, किन ढिलाई भइरहेको छ ? भन्दै चासो आएको बताए ।
तिवारीको हत्याका सम्बन्धमा छानविन गर्न सरकारले ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन आयोग एक महिना अघि नै गठन गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका एआइजी विज्ञानराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय छानविन समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआईजी यादवप्रसाद रेग्मी, एसएसपी मनोज न्यौपाने र गृहका उपसचिव शिवराज जोशी छन् ।
अनुसन्धान टोलीले घटना स्थल, परिवारजन, आफन्तहरु तथा पार्टीका विभिन्न तहका नेता कार्यकर्ताहरुलाई छुट्टा छुट्टै भेट गरिसकेको छ । साथै आशंकाको घेरामा रहेकाहरुसमेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । तिनै नियन्त्रणमा लिएकाहरुलाई समेत प्रहरीले छाड्न लागेको र अनुसन्धान कमजोर भएको आरोप लागेको छ । तर, प्रहरीले यस्तो आरोप सही नरहेको बताउ“छ । युवा संघ रुपन्देहीले आयोगको छानबिन किन ढिलाई भयो ? भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आइतबार ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको युवा संघका जिल्ला सचिव नहकुल शाहीले जानकारी दिए ।
घटनाबारे छानविन गर्नका लागि युवा संघ नेपालले पनि ३ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको र त्यो समितिले प्रहरीको अनुसन्धान टोलीलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको युवा संघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देवराज पोखरेलले जानकारी दिए । तिवारीको हत्यामा कतिपय अपराधी र तिनका सहयोगीका जालो परैसम्म पुगेको हुन सक्ने कतिपयको दाबी छ । स्रोतका अनुसार भू–माफियासमेत तिवारी हत्यामा सामेल रहेका हुन सक्छन् । ‘हदबन्दीको भन्दा धेरै जग्गा रहेको भन्दै कब्जा गर्ने र त्यसैलाई मह“गो मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको एउटा समूहले तिवारीलाई निशाना बनाएको हुन सक्छ ।’ प्रहरीको अनुसन्धान यो पाटोमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तिवारी राजनीति भन्दा पनि समाजसेवामा बढी खट्थे ।
‘उनले अन्याय गर्दैनथे, नत अरुले गरेको नै चुप लागेर सहन्थे । यसैले कतिपय अपराधीहरुको नजरमा उनी परेका हुनसक्छन’ एमाले रुपन्देहीका सदस्य तथा सुकुम्बासी क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुसन्धानरत युवा नेता सिद्धिचरण भट्टराई भन्छन्–‘प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले सबै पाटोमा गहिरिएर अनुसन्धान गर्नैपर्छ । परिवारजनमाथि दोहोरो पीडा परिरहेको छ जुन अर्को अन्याय पनि हो ।’ तिवारीको हत्याका विषयलाई कतिपय मिडिया र पत्रकारहरुले भ्रामक खालको समाचार लेखेपछि परिवारजनमा पीडास“गै तनाव सिर्जना भएको थियो । उनीहरुले आयोगको टोलीसमक्ष समेत यो विषयमा गुनासो गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष समेत परिवारले यस्तो गुनासो सुनाएको थियो । ओलीले परिवारको पीडा आफूहरुलाई पनि सरह रहेको भन्दै अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका थिए । उनले परिवारजनको संरक्षणका लागि पार्टीलेसमेत योजना बनाएको बताएका थिए । अध्यक्ष ओली परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्न र तिवारीलाई श्रद्धाञ्जली दिन उनको देवदहस्थित घरमै आएका थिए ।
कतिपय मिडियाले तिवारीलाई ठेक्कापट्टा र लेनदेनको विषयसित जोडेर समाचार सम्प्रेषित गरेका थिए । लगत्तै युवा संघले पत्रकार सम्मेलन गरी तिवारी कुनै पनि ठेक्का पट्टा र लेनदेनका काममा संलग्न रहेका एउटा पनि प्रमाण ल्याए आफूहरुले राजनीति नै छाडिदिने चुनौती दिएका थिए । तिवारी वास्तवमै समाजसेवी र इमान्दार युवा नेता रहेको देवदहका सर्बसाधारणहरु बताउ“छन् ।
अध्यक्ष तिवारीको हत्या भएपछि गृह मन्त्रालयले एआईजी विज्ञानराज शर्माको संयोजकत्वमा, नेपाल प्रहरीले लुम्बिनी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा, युवा संघ नेपालले महासचिव किरण पौडेलको संयोजकत्वमा, छानबिन आयोग गठन गरेर विभिन्न पाटाबाट अनुसन्धान थालेको थियो । ती तीनवटै आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । तिवारीको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न समूह र व्यक्तिले जिम्मेवारी लिएतापनि अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ नपर्दा रुपन्देहीमा आम सर्वसाधारण त्रसित भएका छन् ।
हत्या आफैले गरेको दाबी गर्ने मनोज को हो ?
तिवारी हत्यामा आफ्नो संलग्नता विभिन्न माध्यममा टेलिफोन गरेर स्वीकार गर्ने मनोज पुन (मनोज बुढामगर) देवदहकै बासिन्दा हुन् । उनी माओवादीका कार्यकर्ता थिए । २०६५ चैत १३ गते राति बुटवलमा युवा संघका नेता प्रचण्ड थैवको हत्या हुने बेलामा पुन माओवादीको वाइसिएलमा सक्रिय थिए । त्यसपछि माओवादी छाडेर ‘आफू अब सुध्रिएको’ भन्दै युथ फोर्समा आउन चाहेको बताएका थिए । सोही अनुरुप उनलाई तिवारीलगायतका एमालेका नेताहरुले नै पहल गरेर युथ फोर्समा भित्राएका थिए ।
केही समय उनी युथ फोर्समै रहे पनि । तर, आचरण नसुध्रिएको, आपराधिक मनोवृत्ति झन बढेको भन्दै एमालेभित्र कुरा उठ्यो । उनी कारबाहीमा परे । कारबाहीमा परेपछि उनलाई युथ फोर्सबाट निष्कासन गरियो । उनी त्यो कारबाही गराउने काममा तिवारी जस्ता युवा नेताहरु सामेल रहेको भन्दै सुरुदेखि नै हत्याको योजना बनाएको बताइएको छ । विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । तीन वटा मूख्य आपराधिक घटनाको अभियोग प्रहरीमै पुगेपछि पुन प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
नदीजन्य स्रोतको दुरुपयोग, तस्करी, लागु औषधलगायतका अपराधमा संलग्नहरुलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, समाज सभ्य बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने तिवारी समाज सुधारमै लागेका कारण त्यस्ता अपराधीको निशानामा परेको कतिपय जानकारहरुको दाबी छ ।
१० महिनाअघि तिवारीको हत्या प्रयास गर्दै गोली हान्ने समूहमा पुनको समेत संलग्नता रहेको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीका अनुसार, २० फागुन २०७२ मा पनि तिवारीको हत्या प्रयास भएको थियो । उक्त घटनामा पुनसहित अन्य ८ जनाको सहभागिता रहेको भन्दै तिवारीले किटानी जाहेरी पनि दिएका थिए । तर, गत जेठमा अन्य सबै पक्राउ परे पनि पुन अहिलेसम्म फरार नै छन् ।
उनै पुनले हत्या गरेको दाबी गरेका छन् । तर, यो विषयमा युवा संघ र परिवार मान्न तयार नै छैन् । हत्यामा अर्कै षड्यन्त्र लुकेको धेरैको दाबी छ । एभीन्यूज टेलिभिजनमा टेलिफोन गरेर आफैले हत्या गरेको दाबी गर्ने मनोज पुन वास्तवमै कहा“ छन सार्वजनिक भएको छैन् । उनी मलेसियामा रहेको बताए पनि उनी भारतका विभिन्न शहरमा लुकेर नेपालमा आपराधिक गतिविधि चलाइरहेको प्रहरीको दाबी छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका तिवारी ६ वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया बसेर ७ वर्षअघि जिल्ला फर्केका थिए । उनले देवदहमा ईंट्टा उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका थिए । उनका दुई काखे छोरी, पत्नी र आमा घरमा छन् । उनको हत्या पछि परिवारजन गहिरो शोकमा छ । पत्नी विक्षिप्त जस्तै बनेकी छन् ।